घोडा - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा खिलौने rocking घोडा
मर्न घोडाहरू rocking प्रत्येक बच्चाको कोठामा एक क्लासिक क्लासिक हो घोडाहरू rocking यति लामो छैन, कसैलाई संदिग्ध हुन सक्छ। विशेषज्ञहरूको अनुसार, बालबालिकाका खिलौनेहरू 17 मा छन्। अमेरिकामा सदी। आज भन्दा पहिले ज्ञात धावकहरू थिए, खेल घोडाहरू घोडाहरू थिए। सन्तान घोडाहरू अपेक्षाकृत वास्तविक रूपमा सवारी गर्न सक्छन् र झन् झन् झन् झन् झन् बढ्दै जान्छ, किनभने बालबालिकाको कोठामा खिलौने निश्चित ठाउँ राख्न सक्दछ।
बच्चाहरु को कोठा मा धेरै रमाइलो
क्रिसमस वा जन्मदिन जस्ता अवसरहरूको लागि घोडाहरू rocking एक इष्टतम उपहार। बेशक, काठ घोडाहरू तर यी अवसरहरूमा सीमित छैन। विभिन्न डिजाइनहरू, रोलर्सहरू बिना वा उपलब्ध छन्। धेरै लोकप्रिय पनि मोडेल हुन्, जुन शोर बनाउन सक्छ। खिलौने को डिजाइन मा क्लासिक छ rocking घोडा आज पनि अझै एक लोकप्रिय डिजाइन। अझै पनि काठको विभिन्न संस्करणहरू खुसीसाथ देखिएका छन् र आंशिक रूपमा आलुसँग। अपार्टमेंट मा या घर मा धेरै रमाइलो को गारंटी छ। झिंगिङ्ग बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय आंदोलन मध्ये एक छैन। चट्टानको सुखद आरामको प्रभावले अन्ततः पाडलमा वा आमाबाबुको हातमा अनुभव गरेको छ। यदि बच्चाहरु अझै स्विंग को लागि धेरै सानो छ, त्यसपछि त्यो हो rocking घोडा सामान्यतया पहिल्यै उपयुक्त छ। बच्चाहरु लाई सामान्यतया धेरै गर्व हुन्छ जब सवारी पहिला हिसाब हुन्छ। धेरै सकारात्मक यो पनि छ कि खिलौनेहरू धेरै ठाडो जस्तो लाग्दछन्। को घोडाहरू rocking तर तिनीहरू मात्र धेरै मजा लिन्छन्, तर सन्तुलनलाई पनि तालिम दिन्छन्। कुकुर र तालको साथसाथै शरीरको भावनाले प्रशिक्षित गर्दछ।
त्यो कहिले हुन्छ? rocking घोडा लागि उपयोगी?
खिलौनेहरूको लागि सामान्यतया कुनै खाली उमेर सीमा छैन, किनकि फरक आकार र आकार पनि छन्। धेरै भिन्न भिन्नताहरू उपलब्ध छन्, चाहे तिनीहरू युनिकोर्न, काठ घोडा, टट्टू वा सामान्य हो घोडाहरू rocking, केहि मोडेल पहिले नै9उमेर सम्म 12 महिना सम्म बच्चाहरुको लागि उपयुक्त छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बच्चाहरू पहिले नै आफ्नै मा बस्न सक्छन्। बच्चाहरु को उमेर, वजन र शरीर को आकार को आकार को लागी सर्वश्रेष्ठ चुनिएको छ। आमाबाबुले पनि यस्ता विशेषताहरूको बारेमा सचेत हुनुपर्दछ जुन खिलौना हुनुपर्दछ। सामग्री, सिट उचाइ र प्रशोधन एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। शिशुहरु को लागि नरम हो घोडाहरू rocking आलुको आवरण संग। ठूला बच्चाहरूका लागि मोडेलहरू काठको बनाइएका छन्। धेरै ठाडो, खिलौना प्राकृतिक देखिन्छ जब एक महान रंग उपलब्ध छ। कुनै पनि कुरामा कुन मोडेल खरीदिएको छ, केवल पर्यवेक्षण अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो स्विङ बच्चाहरू। खिलौनेको साथ पहिलो प्रयासमा, बच्चाहरू सबै भन्दा राम्रो सहयोग गर्नै पर्दछ। यदि स्विङ खिलौनेहरू खरीद गरिन्छ भने त्यहाँ कुनै किनारहरू र कोनेहरू हुँदैनन्। साथै स्थिरता संग छ घोडाहरू rocking धेरै महत्त्वपूर्ण। शिकंजा र फिक्सिंगहरू आमाबाबुले नियमित रूपमा जाँच गरीनु पर्छ र ढीलो पेंचहरू सधैं बलियो हुनुपर्छ।
यसको धेरै फरक मोडेलहरू घोडाहरू rocking
यस दिन र उमेरमा, अब मात्र क्लासिक छैन rocking घोडा सुन्दर डिजाइन संग। त्यहाँ किन्नु पर्ने फरक आकार र आकारहरू छन्। घोडाहरू को अतिरिक्त आज पनि डायनासोर, कुत्त र गधा पनि छन्। को घोडाहरू rocking अझै अझै धेरै लोकप्रिय छन् र तिनीहरू आलु, प्लास्टिक वा काठबाट बनाइन्छन्। निर्माण र सामग्रीको आधारमा, मोडेलहरूले निश्चित मात्रामा सामना गर्न सक्छन्। खिलौनेहरू बिना वा कास्ट्रेजहरू उपलब्ध छन्, एक कुनामा, प्लास्टिक, पूर्ण-ठूला, अप्रत्यक्ष वा उपचार गरिएको काठबाट बनेका छन्। यसैले एक उपयुक्त मोडेल प्रत्येक अनुरोध को लागि प्रस्तावित छ। सानो राजकुमारीहरू घोडा र नरम फर संग घोडाहरू प्रेम गर्छन्। जर्मन बच्चाहरु को कोठा मा rocking घोडा 17 पछि केहिको लागि होइन। सबैभन्दा लोकप्रिय खिलौना शताब्दी गर्नुहोस्। लोकप्रियताको परिणाम मजा र खेलको संयोजनबाट। जब स्विंगिंग, ब्यालेन्स, लय र शरीरको भावना स्वचालित रूपमा प्रशिक्षित गरिन्छ।
यस गुणहरू घोडाहरू rocking
त्यहाँ धेरै फरक छन् पशु rocking, तर घोडाहरू सबैभन्दा लोकप्रिय हुन्छन्। बच्चाहरुका लागि, निस्सन्देह, खेल फोकस हो, तर आमाबाबुले खेल मिसिनको शैक्षिक फाइदाहरूमा ध्यान दिन्छन्। मोडेलहरू कल्पनाशील डिजाइनसँग पूर्ण सहमत हुन सक्छन् र विभिन्न मोडेलहरूसँग फरक फरक विषय संसारहरू पनि समावेश छन्। डिजाइन को माध्यम ले, बच्चा को कल्पना को उत्तेजित गर्दछ र बच्चाहरु कल्पनाशील खेल को लागि प्रेरित हुन्छन्। सुन्दर मोडेलहरूले बालबालिकाको कोठालाई भित्तामा पनि बढाउन सक्छ। को घोडाहरू rocking सामान्यतया विभिन्न उमेर वर्गहरूको लागि त्यहाँ छन्। छ महिनाको उमेरमा बच्चाहरु लाई अधिक सहयोग चाहिन्छ, जस्तै ठूला छोराछोरीहरु, र यसैले पनि विभिन्न सुरक्षा सावधानीहरू पनि छन्। अन्तमा, साना प्रयोगकर्ताहरू सधैं राम्रोसँग सुरक्षित हुनुपर्छ। व्यक्तिगत मोडेलको साथ, बच्चाको विकास पदोन्नति गरिएको छ र लय भावना र सन्तुलन बजाउने यन्त्रको स्थिर आचरणको साथ बनाइन्छ। यस बीच, धेरै निर्माताहरूले पनि एक्स्ट्रास्ट एक्स्ट्रास्ट प्रस्ताव गर्छन्, त्यसकारण त्यहाँ मात्र रिज वा सजावटी हट्टरहरू छैनन् तर प्रकाश र ध्वनि प्रभावहरू पनि एकीकृत हुन्छन्। धावकहरूको निरन्तर झन्झट गरेर, बच्चाहरू सधैं आमाको शरीरमा समयको सम्झना गरिन्छ, र यति शान्त प्रभाव। आमाबाबुले बच्चाहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा असहमति नगरेको हुँदैन, र निरन्तर अवलोकन सबै महत्त्वपूर्ण छ, अर्को अग्लो पीढी। विशेष गरी जीवनको पहिलो वर्षमा शिशुहरू झन्झल्किँदा समर्थन हुनुपर्छ र यो खिलौनेहरूमा धेरै समय बित्तिकै हुँदैन।
अन्त्य र सामग्री
निर्णय गर्नु अघि घोडाहरू rocking फरक उमेरका कक्षाहरू सूचीमा लिइन्छ।6महिनाको उमेर बाट, सामान्यतया सुरक्षा जिंगल्स र नरम चिसोहरू संग मोडेलहरू छन्। त्यहाँ एक वर्ष बाट हटाउन सकिने ब्याकडार र सिटबारहरू छन्। दुई वर्षको उमेरबाट मोडेलहरू काठको बनाइएका छन्।4र6वर्षका बीचका पुराना बच्चाहरु प्राय: मोडेलहरू जस्तै जुन यथार्थवादी विवरणहरू प्रस्ताव गर्दछ र व्यक्तिगत रूपमा लैजान सकिन्छ। बच्चाको खेल तीव्र हुन सक्छ, उदाहरणको लागि, हटाउन सकिने दुलही संग। प्लेब्याक ह्यान्डलिङको साथ सम्मानित ह्यान्डलिंग गर्न सकिन्छ। सामग्रीको छनौट बच्चाको उमेरमा निर्भर गर्दछ। दुई वर्षको उमेरबाट, कसैले पनि प्लास्टिक, काठ र चिसो बीचको छनौट गर्न सक्दछ। सबै सामग्रीहरू फरक गुणहरू छन्। काठको लागि घोडाहरू rocking सामान्यतया समयहीन, सजिलो, बलियो, स्थिर, भारी, लामो समयसम्म र उच्च गुणस्तरको लागि सजिलो छ। कम चौडाइको कारण, तथापि, ठूला बच्चाहरूको लागि यो उपयुक्त छ। मसला पनि काठको फ्रेममा छ, तर नरम प्याडिंग छ। कोषको लागि हो घोडाहरू rocking स्वाभाविक रूप देखि cuddly र केहि मामलाहरुमा कवर पनि कम गर्न सक्छन्। मोडेलमा निर्भर गर्दछ, उजुरी यथार्थवादी छन्, तर मर्मत प्रयास पनि बढेको छ। प्लास्टिकको मोडेल सामान्यतया सजिलो हुन्छ, उज्ज्वल रंगहरूमा प्राय: उपलब्ध छन् र तिनीहरू हल्का हुन्छन्। त्यहाँ काठ र चिसोको संयोजन प्रायः संयोजन हुन्छन्। को घोडाहरू rocking त्यसो भए पनि उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी छिन्। कुनै पनि प्रकारको कुन मोडेलमा अन्तमा खरिद गरिएको छैन, सामग्रीको प्रसोधनको लागि सधैँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जब खरिद गर्दै घोडाहरू rocking यो महत्वपूर्ण छ कि कुनै किनाराहरू वा तीव्र कोनेहरू छैनन्। खिलौना को मामला मा, वहाँ detachable छोटा भाग भी नहीं होना चाहिए।
सही मोडेल छान्नुहोस् र सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्
को लागि घोडाहरू rocking चासो, कसलाई थाहा छ कि त्यहाँ दुई कोटिहरू छन्। एकैछिनमा चट्टानवाला सवारीहरू छन् र अर्कोतिर चट्टानकारी जनावरहरू छन्। गाडीहरू विशेष गरी मोटरसाइकलहरू र कारहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। पशु राज्य संग कल्पना कुनै सीमा छैन। त्यहाँ उत्कृष्ट जीवहरू, स्नर्सहरू, सिंहहरू वा भेडाहरू छन्। उदाहरणहरू, युनिकोर्न्स वा ड्रेगनहरू छन्। त्यहाँ अनन्त विविधता छ र त्यसैले बच्चाछोरीको कोठा आश्चर्यचकित हुन सक्छ। धेरै घोडाहरू rocking धावकहरूसँग प्रस्ताव गरिन्छ, तर पाङ्ग्राहरूसँग मोडेल पनि उपलब्ध छन्। रोलरहरूसँग, त्यहाँ फाइदा उठाउन सकिन्छ कि बच्चाहरू कोठामा स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्छन्। रोल-अप यसरी अधिक यथार्थवादी र खेल्ने मजा पनि अझ तीव्र छ। तथापि, भिन्नता केवल बालबालिकाको लागि होईन, जहाँ मोटर कुञ्जीहरू पहिले नै सुरक्षित छन्। अन्य अवस्थाहरूमा चोटको जोखिम निकै ठूलो हुनेछ। यदि एकीकृत soundeffects यदि, खेल खेल अनुभव यसैले विशेष गरी वास्तविक छ। एक बटनको धक्कामा, एक बार्किङ वा एक सच्चा-जीवन-जीवनले ध्वनि गार्न सक्छ। केहि संस्करणहरू घोडाहरू rocking तपाईं यहाँ आरामदायक सुखी खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। हुनुपर्छ rocking घोडा खरिद गरिन्छ, सिट उचाइ हेर्न सकिन्छ। उच्च बैठक क्षेत्र, अधिक कठिन बच्चाहरु को माथि र तल छ। बच्चाहरूको सुरक्षा निस्सन्देह, पहिलो प्राथमिकता हो। जब स्विंग गर्दै, ठूला छोराछोरीहरू धेरै साहसी छन्, र प्रायः बच्चाहरु लाई पनि ओभरट्रेट गर्न सकिन्छ। चट्टानकारी जनावरहरूको निर्माण यी सर्तहरू ठीकसँग अनुकूल छ। को लागि महत्वपूर्ण घोडाहरू rocking विस्तृत धावकहरू, हल्टर्सहरू, स्ट्रोटरहरू धादिनेहरू र सुरक्षित सामग्रीहरू हुन्। Grips सुरक्षित फिट सुनिश्चित गर्नुहोस्। पकडहरू राम्ररी समाप्त हुनुपर्छ र त्यहाँ त्यहाँ कुनै पनि निर्दिष्ट किनारहरू हुनुपर्दछ। काठ को हैंडल उत्तम चित्र मा पेंट गरिएको छ, ताकि कुनै पलट गठन छैन। धावकहरू व्यापक हुनुपर्छ, किनकि व्यापक क्षेत्रले जोखिमलाई पाउँछ जुन खुट्टा दौडका बीचमा हुन्छ। धादिङका बन्द तत्वहरू महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले जंगली खेलमा ओभरलैप हटाइयो। Soldery paintings र colors महत्त्वपूर्ण छन् किनकि बच्चाहरु आफ्नो मुख मा वस्तुहरु राख्न को लागी।
अघिल्लो लेखयात्रा खाट
अर्को लेखबच्चाहरु डेस्क कुर्सी